Aza manjehy ny andro ho lava - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Iza ilay izy ?
Aza manjehy ny andro ho lava
Hifarana ny fotoan’ny fampielezan-kevitra. Hateloana (alatsinainy 21, talata 22 ary alarobia 23 okitobra sisa) dia hikatona ny fotoan’ny fampielezan-kevitra ara-dalana. Aiza ho aiza ny mpifidy tsirairay ? Ailiho ny be nahoana, fanteno ny telo aman’efatra, na mihoatra kely, aza manjehy ny andro ho lava.
Samy manao izay fara heriny ny mpanao politika tsirairay amin’izao fotoana izao hanoratana izao (alahady 20 okitobra hariva).
Andaniny ireo tsy mankasitraka ny fisian’izao fifidianana izao. Maromaro izy ireo. Raha ny laza dia lohalaharana amin’izany ny Amiraly Didier Ratsiraka. Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety izy, izay niendrika meeting kely, tao amina hotely lehibe iray tao Antananarivo. Nalefa manontolo tao amin’ny fahitalavitra TVM sy TVPlus izany ny harivan’ ny andro nanaovany ilay valan-dresaka. Ny Pr Zafy moa efa fantatra ny heviny. Eo koa i Pety Rakotoniaina sy ny antoko Tambatra ary ireo mpanao politika manara-dia azy ireo. Nanao atrik’asa namory solontena manerana ny Nosy mihitsy izy ireo nandritra ny hateloana (zoma 18 hatramin’ny alahady 20 okitobra teo) tao Antananarivo. Ireo sokajy roa ireo no tena re. Miara-dia ve izy ireo ? Miray tendro ve ? Tsy tazana ho miara-miasa aloha izy ireo. Saingy… Nifamotoana tao amin’ny Carlton ny alahady Ny ventin-kevitra voizin’izy telo tonta ireo dia ny filazana fa tsy tomombana araka ny tokony ho izy izao fifidianana izao. Hitondra any amina krizy vaovao indray. Mpanohariana ny fahitana azy ireo raha ny hevitra fonosin’ny lalàna miantso ny mpifidy haneho ny safidiny no itarafana azy. Marihina fa tsy manan-danja ny tahan’ny tsy mandray anjara (taux d’abstention) na koa ny tahan’ny vato fotsy (vote blanc).
Mitohy ny tolona
Raha eo ireo sokajy miezaka hanaitra ny sain’ny maro fa tsy vahaolana izao fifidianana tontosaina tery vay manta izao dia, ankilany, miroso hatrany ny fampielezan-kevitra. Samy efa miroso amin’ny fara doboka tokoa ireo kandidà. Azo raisina ho fara doboka ireny famoriam-bahoaka ao amin’ny Coliseum ireny. Mbola tahaka izany koa ny tao Mahamasina ho ana kandidà iray. Manontona ny heriny tokoa ireo mpifaninana ka mitombo ny isan’ireo fiara mitety vohitra mitabataba manimba sofina, mandrava ny filaminana…
Ny olon-tsotra koa dia samy manao ny fandresen-dahatra. “Aza avela hiverina eo amin’ny fitondrana ny foza” hoy ity ramatoa iray tao amina toerana fanaovana volo. Isan’ny toerana tena hifanakalozan-kevitra tokoa ny fanaovana volo. “Ka iza anefa ny foza amin’ireo ?” hoy ity ramatoa iray. “Raha izany dia aleo izay olona tsy fantatra mihitsy no fidiana” hoy ny iray mbola milahatra miandry ny anjarany. Nanonona anarana tokoa izy. Niniana tsy naverina eto mba tsy ilazana fa miandany isika. Maromaro ireo kandidà zara raha fantatra ny anarany. Na ny mpanao gazety aza mbola tsy mahafehy ny anaran’ireo kandida rehetra, mainka ny anarana sy ny nomeraon’ny kandida tsirairay no hangatahana. Mbola misy ny anarana sy ny nomeraon’ny kandida ary ny filaharany ao amin’ny bileta tokana. Misy ny olona mampifandipatra izany. Ireo efa tena mahafantatra ny kandida ho fidiny no mahavaly io kilalao io. Ny manana ny nomerao voalohany no mora valiana. Manaraka ao ny nomerao farany. Ny sisa dia mametraka olana
Efa akaiky ny fotoana hifidianana hateloana hoy isika teo. Efa tokony ho vitan’ny mpifidy tsirairay ny nizara ireo kandida ireo. Ao ireo tena nailiko. Maro ny antony nanilihana azy ireo. Antony iray ohatra, ny fahitana fa mandrebireby vahoaka fotsiny ny kandida vitsivitsy. Tsy hita taratra teny anivon’ny vahoaka mpifidy mihitsy izy ireny. Ao ireo hita fa mampiasa volabe tsy fanta-piaviana. Trosa hamatotra ny firenena izany. Ailika ihany koa izay mampanantena volana.
Ho sarotra ho an’ny mpifidy iray ny hifantina ny olona ho fidiny. Misy ireo tranonkala manampy amin’izany tahaka ny www.presidentielles2013/madatsara.com. Afaka mampitaha kandida roa isaky ny mandeha ny mpitsidika io adiresy io. Eo koa ny fifanakalozan-kevitra ao antrano. Nampisaraka fianakaviana ny resaka politika tao anatin’izao krizy izao. Fotoana koa izao hifanazavana hikarohana izay tena olona hitondra fanavaozana ho an’ny firenena. Tsy manara-penitra ny fifidianana ankehitriny. Tsy lavina izany. Tsy afaka ny hitazana fotsiny anefa ary avela hahazo fahefana feno izay mpanao politika efa hita fa tsy nahomby ary indrindra nampiditra ny firenena anaty kizo. Fohy sisa ny fotoana ka izany no ilazana fa “Aza manjehy ny andro ho lava”. Be ny harena eto ka mirangorango ny mpanararaotra sy ny mamba noana. Sokafy ny maso. Jereo izay tsy manara-dalana. Fantaro izay mitady hividy ny safidin’ny Gasy. Iza no tena hamarana ny krizy ? Mahaiza mifidy.